War ay soo saareen goor dhow kooxda Xuuthiyiinta shiicada ah ee dalka Yemen ayaa waxay ku shaaciyeen iney dileen Madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Saalax ka dib dagaal qaraar oo ka dhacay magaalada Sanca.
Warbaahinta Xuutiyiinta uu taageero Iiraan ayaa abinayay in Cali Cabdalla Saalax lagu dilay dagaalka.
Sarkaal u hadlay Jabhada Xuutiyiinta ee ay taageerto Iiraan ayaa sheegay inay la wareegeen meelaha muhiimka ah ee Koofurta Caasimadda Sanca.l
Muuqaal goor dhow laga baahiyey Tvga Al-Carabiya ayaa muujinaya meydka Madaxweyne Saalax oo ay jiid jiidayaan dagaalyahano ka tirsan kooxda Xuutihyiinta.
Dagaalka labada dhinac ayaa bilowday lix maalmood ka hor ka dib markii Cali Cabdalla Saalax sheegay inuu doonayo wadahadal inuu la yeesho xulafada uu Sacuudigu horseedka ka yahay ee taageeraya dawladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay.
Wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay ‘in bog cusub la furo’ haddii isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo ay xannibaadda ka qaadaan waqooyiga Yemen, ayna joojiyaan weerarrada, waxaana hadalkaas ka carooday kooxda Xuutiyiinta taasoo keentay iney dagaal ku soo qaadaan Saalax oo ugu dambeyn ay dileen.
M. Farmaajo oo shir gudoomiyey shir weyne looga hadlayo amniga oo Muqdisho ka furmay
Kenyan Delegation Lands In Somalia